अरबी युवती र नेपाली युवा’को बियोगान्त प्रेम कथा, जसले रुवायो कयौं देशका करोडौं मानिस`लाई. | Rochak
June 26, 2021 NepstokLeaveaComment on अरबी युवती र नेपाली युवा’को बियोगान्त प्रेम कथा, जसले रुवायो कयौं देशका करोडौं मानिस`लाई.
साउदीका हरेक पत्रपत्रिकामा नुरको आ`त्मह त्याको खबरले म आश्चर्यमा परेँ म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनमा कम्युटरमा ब्यस्त रहन्थे ।तर अचान`क पत्रिकामा परेको मेराे नजरले अचम्मै बनायो । हुन त मलाइ पनि कहाँ अरबी पढ्न आउथ्यो र राजको मोबाइलमा देखेको फोटोको कारण`ले चिनेको मात्रै हो ।
उनले दिएको यती मायानै मेरो जिन्दगीको पुर्ण खुसी बन्नेछ । हेरौ जे लेखेको छ यो भाग्यमा त्यही हुन्छ । मलाइ यही म`र्न लेखेको छ भने म पराइकै माटोमा मरौ`ला ।हो मलाइ मेरो स्वच्छ पशुपतीमा ठाँउ नमिल्ला, बाग्मतीको पानीले चोखीन नपाइएला,चन्दनसँगै जल्न नपाइएला तर मायामा दिएको ज्या`न कहाँ खेर जान्छ र ? बिशाल, हुन त म अभागी ठहरीनेछु, बिदेशको माटोमा पुरीँदा तर पनि माया भनेको माया हो ।
कहिले भेटेर त कहिले फोनबाट नै लामो समयसम्म उनिहरुको कुराकानी चल्थ्यो । म कहिले काँही जिस्काउथेँ “राज तेरो त काम तमामभो, भाउजुसँग मलाइ नि कुरा गरान त यार । म पनि यसो सुनौ मेरी भाउजुको स्वर जुन स्वरमा राज अल्झिएको छ ।
म आफ्नै दुनियामा ब्यस्त हुन्थे, उनीहरु आफै भित्र हराउथे । एक कान दुइ कान मैदान । उनीहरुको प्रेम नुरको घरपरिवारले थाहा पाए ।उनका बाबा आमाले पु`लीसमा कम्प्लेन गरे । ठुलो रडाकोनै मच्चियो ।अन्त्यमा राजलाइ फाँ`सी सुनाइयो ।
मलाइ फोन,नेट सबै तिर बन्देज लगाइएको थियो । आज मात्रै सबै थोक बाट फुकुवा गरीएको हो । मलाई मेरो साथीले एउटा भिडियो हेर्छस् भनेरदिएको थियो । त्यो भिडियोमा राजलाइ झुन्ड्याएर मारी`एको रहेछ । जुन कुरा मैले सहन सकिन । भिडियो हेर्नु लगत्तै राजको पत्र पनि पाँए । उहाँ सँग मैले पनि पत्रमा भेँटे ।
निशाको पछिल्लो स्वास्थ अवस्था यस्तो ,आयो यति धेरै सहयोग ,निशाका बुवा पहिलोपटक रुदै मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो )
यी किशोर जसले परिक्षा दिन जादा भएको एउटा घटना जुन उनि घर फर्किदा सम्म भाईरल बनिसकेको थियो (भिडियो सहित)-